Ampitomboy ny SEO, Vakio momba ny fanamafisana ny sary! & Ndash; Semalt Expert
Ampitomboy ny SEO, Vakio momba ny fanamafisana ny sary! - Semalt Expert
SEO eo amin'ny pejy SEO sy ny fanatsarana sary dia ny dingana roa voalohany amin'ny fampielezan-kevitra SEO mahomby. Ny fikarohana s dia lasa saina sy mahay kokoa amin'ny fotoana, ary ny fomba fitsaboana ny fikarohana tsara dia tena saro-bidy. Tsy ampy ny votoaty tsara satria tsy maintsy mifantoka amin'ny zavatra maro ianao. Ny antony maro samihafa dia mandray anjara amin'ny fampisehoana ny lozam-pikarohana, ary ny tena manan-danja indrindra dia ny fomba hanatsaranao ny sary nataonao ho an'ny SEO - it consulting in ua.
Raha tranokalan'ny tranonkalanao ny pejy SEO, ny fanatsarana ny sary dia ny fananganana trano. Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny sary dia singa mahery vaika amin'ny tranonkalanao ary tsara lavitra noho ny lahatsoratra an'arivony. Zava-dehibe ny fampiasana ny sary araka ny tokony ho izy mba hahafahany mampita ny hafatrao amin'ny voalohany.
Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny votoatin'ny Internet ny sary nofidinao. Maro ireo sary tsy misy dikany no tsy hanome anao vokatra SEO mahomby toy ny sary tokana amin'ny soratra sy ny famaritana soratra mahazatra.
Ny antokon'ny alt dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fanatsarana ny sary. Izy ireo dia manampy ny saryo maneho ao amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ny karoka ary manatsara ny faharetan'ny tranonkala. Ny motera fikarohana rehetra dia miankina amin'ny lahatsoratry ny saryo satria tsy afaka mamaky ny votoatinao izy ireo, ka ny alimino amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy antitra dia hanapa-kevitra hoe ahoana no ahafahan'ireo sarinao ao amin'ny Google ny vokatra..Ny iray amin'ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny alàlan'ny antitra dia ny mitazona ireo famandrihana fohy, manasokajy ary ny teboka.
Sary sy fampiantranoana:
Ny haben'ny sary iray dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Ataovy azo antoka fa tsy sarotra loatra ny sary azonao ampiasaina mba hampitomboana ny haingam-pandeha. Ampiasao ireo sary kely tsara tarehy izay mora hita ao amin'ny valin'ny fikarohana. Manoro hevitra anao izahay hampiasa sary amin'ny bytes. Ny fitaovana tahaka an'i Yahoo Smushit dia azo ampiasaina hanafoanana ireo bytes be loatra amin'ny sary, izay mahatonga azy ireo ho maivana noho ny teo aloha.
Ny fampiantranoana ny sary dia tena manan-danja kokoa amin'ny famokarana traikefa bebe kokoa amin'ny fikarohana sary Google. Ny Google sy ny fitaovam-pitadiavana hafa dia manome lanjany bebe kokoa ireo sary natsangana tao amin'ilay sehatra mitovy amin'ny sary natsangana tamin'ny sehatra maro. Ny algorithm lehibe momba ny fikarohana Google dia ny famenoana sary miaraka amin'ny lahatsoratra amin'ny tranonkalanao.
Tahaka ny maha-zava-dehibe ny teny fototra ao amin'ny URL-nao, ny filaminana dia tena ilaina amin'ny sary. Ny teny filamatra manan-danja manan-danja dia manampy ny fitaovan'ny fikarohana hanombana ny tranokalanao amin'ny fomba tsara kokoa. Tsy tokony hampiasa ny anaran'ny solosaina ianao, toy ny DSC0119.jpg, satria tsy manome fanazavana ampy momba ny saryo izy ireo. Raha tokony ho izany, tokony hampiasa ny anaran-drakitra sy teny fanalahidy ianao, izay tokony hisaraka amin'ny sehatr'asa.
Sary mampifandray sy lohateny:
Ny sary dia zavatra manintona sy manintona izay mamaritra ny tranokalanao sy ny votoatiny. Ny sary mifandray amin'ny sary dia tsy maintsy manao SEO. Tokony hisoroka mivantana ny sary ianao. Raha tokony ho ianao dia tokony hampiditra ny sary ary hamerina hiverina amin'ny tranokalanao. Ary koa, tokony hampiasa tenifototra mety ianao. Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia manome fampahalalana momba ny votoatinao rehefa misafidy ireo rohy amin'ny rohy ireo mpampiasa. Zava-dehibe ny manampy ny famaritana SEO amin'ny teny sy ny teny manan-danja amin'ny tenifotanao.